"व'र्षा राउत फेरि तानिइन् वि’वादमा"! - PARIJATMEDIA
“व’र्षा राउत फेरि तानिइन् वि’वादमा”!
काठमाडौं। अभिनेत्री वर्षा राउन फेरि वि’वादमा परेकी छिन् । केही समयअघि नेपाल भारत सीमा विवादका विषयमा गरेको टिप्पणीका कारण वि’वादमा आएकी वर्षाले केही समयपछि माफी माग्दै ‘आइन्दा बोल्दा ख्याल गर्ने’ भनेकी थिइन्,। यससँगै उनको यो वि’वाद साम्य हुँदै गएको थियो,। तर, पछिल्लो समय फेरि यो वि’वाद बल्झिएको बताइएको छ’।
नेपाली वेब सिरिज बनाउँदै आएको कलेजेज नेपालले पछिल्लो पटक वर्षाको वि’वादका विषयमा आधारित रहेर व्यङ्ग्यात्मक भिडियो बनाएको थियो । तर, यो छोटो फिल्म अपलोड भएको केही समयमै हटाइयो । ‘आजकलको लभ’को एपिसोड १२७ वर्षाको विवादका विषयमा बनाइएकोमा वर्षाका श्रीमान सन्जोग कोइरालाले निरन्तर दबाब दिएपछि यो भिडियो हटाइएको बताइएको छ,।
कलेजेज नेपाल स्रोतले सन्जोगले दबाब दिएको बताए पनि यो कुराको पुष्टि भइसकेको छैन । यस विषयमा सन्जोग र वर्षाको तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको पनि छैन । यस विषयमा पुष्टि गर्नको लागि वर्षासँग फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क गर्न सकिएन,।
Prevगगन थापा र श्रीमती अन्जना केसी थापाको बिषयलाइ लिएर बिचमा किन आइन नायिका निशा ? दीइन धम्कि !